Ngaba unokukhuphisana kuGoogle ngeShishini eliKhulu? | Martech Zone
Ngaphambi kokuba ucaphuke kum kweli nqaku, nceda ulifunde kakuhle. Anditsho ukuba uGoogle akasisixhobo esifanelekileyo sokufumana okanye akukho ntengiso ibuyayo kutyalo-mali kuzo naziphi na iindlela ezihlawulelweyo okanye zokukhangela eziphilayo. Inqaku lam kweli nqaku kukuba ishishini elikhulu lilawula ngokupheleleyo iziphumo zokukhangela eziphilayo nezihlawulelweyo.
Besisoloko sazi ukuba ukuhlawulwa ngonqakrazo ngalunye ngumjelo apho imali ilawula khona, yimodeli yeshishini. Ukubekwa kuya kuhlala kuye kumthengi ophezulu. Kodwa iindlela zokukhangela eziphilayo zahluke kakhulu. Iminyaka, sikwazile ukuvelisa umxholo ofanelekileyo kwaye uphawuleka kwaye savuzwa nge Inombolo ye-1 isikhundla segama eliphambili kukhuphiswano kuGoogle. Ihambile loo mihla.
Umhlobo olungileyo uAdam Omncinci ubaleka a iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba. Ebesandula ukwenzeka kwisiXeko saseNew York Inman Qhagamshela. URand Fishkin waseMoz wayesisithethi kwaye watyhila kuhlalutyo lakhe ukuba imimandla emi-5 ibekwe kwindawo ephezulu yokukhangela izindlu nomhlaba kwiimarike ezingama-5 eziphezulu eMelika
Ngamanye amagama, ukuba uyinkampani yokuthengiswa kwezindlu kunye nekhulu leminyaka lamava kwesinye sezo zixeko, amathuba akho okuba sezikhundleni ayothusa. Khange isebenzise ukubanje. Inqanaba lokukhangelwa kwezinto eziphilayo zikaGoogle elisetyenziselwa ukuba lithuba lalo naliphi na ishishini lokuphuhlisa umxholo omangalisayo kwaye lifumaneke kwaye libekwe kakuhle. Anditsho ukuba kwakungekho mzamo, kwathatha itoni yomsebenzi… kodwa bekunokwenzeka.
IWebhu efanayo ipapashe ifayile yayo Amabhaso eMama ngo-2016. Iimbasa ezifanayo zeWeb Momentum ziyaqaphela iiwebhusayithi eMelika ezibonise ukuqhubela phambili okungathethekiyo kudidi lwabo lwe-Intanethi ngo-2016. Usetyenziso olufanayo lweWebhu Amanqaku e-algorithmic ahamba ngaphezulu kweendawo ezingama-80 ezigidi ngokugcwala kwazo kunye neemetriki zokuzibandakanya.
Ngaphakathi kuhlalutyo lwezi zinto, uya kufumanisa ukuba ukukhangela yeyona nto ibalulekileyo yokufumanisa iinkampani ezinamandla amakhulu. Nantsi amabhaso abo abaphumeleleyo:
udidi 1st 2nd 3rd
Iindawo zentengiso ezikwi-Intanethi umnqweno.com samsclub.com kmart.com
Electronics Consumer frys.com bestbuy.com hcvdatshintsh.com
Apparel rue21.com yivunewsdec.com mzantsi.com
Iiarhente zokuHamba kwi-Intanethi zzonline.com ephocity.net expedia.com
Amaketanga eehotele hnmatshisa.com ikhetho.czone ihg.com
Iinkonzo zokubhukisha ihotele iihotele.com airbnb.com trivago.com
Airlines yingcube.com aa.com umoya.com
inshorensi ezir.com inkqubela.com geico.com
Banking citi.com imimandla.com imvucube.org
Ukuthenga iimoto yomsix.com autotrader.com iimoto.com
Iindaba neMidiya nkwankwo.com imvucurtsicdube.com ipolitiki.com
Tech News ccm.net iindaba.ycombinator.com yogaswan.com
Iindaba zeShishini bloomberg.com imali.cnn.com iqwhanyan.com
Khuphela ingxelo efanayo yeWebhu ka-2016
Ngelixa kukho iinkampani ezimbalwa ezingalawuliyo kwihlabathi, ziinkampani ezinkulu ezineepokotho ezinzulu ezinentengiso yedijithali kwi-intanethi, ekhokelwa kukuphononongwa kwezinto eziphilayo. Ezi nkampani zinakho ukubonelela ngezicwangciso-qhinga ze-omni-channel, kubandakanya umxholo onamandla ohambelana nokukhuthazwa okuhlawulelweyo okuhlawulelwayo, iiwebhusayithi eziphuculweyo kunye nentengiso ephembelelayo. Olo dibaniso luyabiza - kodwa luyalutshabalalisa ukhuphiswano.
Kungenxa yoko le nto iinkampani ezincinci kunye nabapapashi kufuneka basebenzise amandla abo ukuze babonelele. Njengoko ujonga kwiinkampani ezilawula uGoogle, akufuneki uzixelise. Kuya kufuneka uzahlule kubo, nokuba ujonge ukwenza amaphulo aneziqulatho ezingasokuze zibeke emngciphekweni. Abaphulaphuli bakho basalambele into eyahlukileyo- ungahluka njani? Ukuba awukwazi ukubeka ngaphezulu kokhuphiswano kuGoogle, ubuncinci usenokuxhomekeka kwezentlalo ukuze wandise umyalezo wakho.
Yiyo loo nto isicwangciso esiliqili kubathengi bethu siqhubeka nokuba luphando kunye nophuhliso lwe ngezantsi, Iigraphic zoopopayi, yaye amaphepha amhlophe. Isiqwenga somxholo esiphandwe kakuhle, sihle, kwaye sixabisekileyo siza kuqhubeka siqhubela ingqalelo kunye negunya kwinkampani yakho. Awunakho ukubekwa kwinqanaba, kodwa uya kwabiwa kwaye ufumaneke ngabaphulaphuli abafanelekileyo obafunayo.
tags: 2016isosi yearhenteGoogle +indodaamabhaso okomelezainkwenkweuphando lwezinto eziphilayoukukhangela okuhlawulelweyoirandi yesikhumba sentlanziudidiukuthengisa izindlu nomhlabangokufanayo
I-SEO Iceberg: Jonga izinto ezifihlakeleyo ezichaphazela uPhando lweOrganic